စကားဝိုင်းမှ သူ့အမြင်များ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« လက်က်ျာစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားဝါဒ အင်အားကောင်းလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ
Sr General Than Shwe ယခုအချိန်အထိ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေသည် နောက်ကွယ်မှ နိုင်ငံတော်အာဏာ အရပ်ရပ် ကို ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်သော အာဏာရှင်ကြီးပင် ဖြစ်သည် »
Maung Maung Skw commented on Swe Mon’s post
သီတဂူ့ တရားပွဲ မလေးမှာလာလုပ်ဖို့ စီစဉ် ထားတယ်
တရားပွဲ တပွဲရဖို့ ….အချိန် ၆လကနေ ….၈လလောက်အထိ… ကြိုတင် booking လုပ်ရတဲ့ သီတဂူက… ၂လထဲနဲ့ တရားပွဲ လက်ခံထားတာ….
တရားပွဲ…လုပ်မဲ့အထဲမှာ… တနေရာက ပီနန်း ဘာတာဝတ် ဆိုတဲ့အမဲရောင်နယ်မြေ-
သီတဂူက ဘာတွေညာတွေပြောလို့ ဆိုပြီး …ကျွန်တော်တို့က..သီတဂူကို….ဘယ်လိုဘဲ သတ်မှတ် သတ်မှတ်-မြန်မာဗုဒ္ဓတွေအတွက်တော့ သူကအကြီးဆုံးဘုန်းကြီးဘဲ
သူသာ မလေးရှားခရီးစဉ်မှာ တခုခု ဖြစ်လို့ ကတော့…. မြန်မာပြည်ထဲမှာပွဲဘဲ
ရခိုင်အေးမောင်တို့ သေနတ်နဲ့…အပြစ်ခံရတာ ကွာလာလမ်ပူမြို့ ထဲမှာနော်……. အခုထိ လက်သည် ဘယ်သူမှန်းမသိသေးဘူး….
အေးမောင်ကဘဲ နံမယ်ကြီးအောင် သူ့လူတွေနဲ့သူ…လုပ်လိုက် တာလား
-AA Army က တရုတ်ကပေးတဲ့ ဒေါ်လာဆယ်သန်းမရလို့ အေးမောင်ကိုဝင်ပစ် တာလား-
ဗမာစစ်အစိုးရကဘဲ အေးမောင်ကို ရှင်းခြင်လို့ လုပ်တာဘဲလား-
အဲ့ဒီတော့ ဒီအချိန် ဒီအခါမှာ ဘာဖြစ်လို့ သီတဂူကို စစ်အစိုးရက မလေးရှားကို လာစေချင်ရတာလဲ…..
စစ်အစိုးရလူတွေက သီတဂူကို မလေးရှားမှာ ဘာလုပ် ကြမှာလဲ-
အနဲဆုံး သီတဂူစီးတဲ့ကား နံပါတ်ပြားလောက် သေနတ်ကျည်ဆံမှန်သွားခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင်..
– အစိုးရရဲ့ စစ်ခွေးonline သမားတွေက ရခိုင်မှာ မသီတာထွေးကိစ္စဖွသလိုမျိုး ဖွဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပြီးသား-
ဘယ်လို လုပ် တားဆီးကြမလဲ….
ဒီမနက်က အိပ်ယာထပြီး မုန့်လေး ဘာလေး ထွက်ဝယ်ရင်း အပြင်ခဏထွက်ဖြစ်တော့ မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ရဲမှူးကြီးတစ်ဦးနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူက ၆၅ ကျော် ၇၀ နား။ ပင်စင်စားပေမယ့် စမတ်ကျကျနဲ့ လန်းဆန်းနေဆဲပါပဲ။ တစ်လမ်းတည်းနေကြသူတွေပီပီ အပြန်အလှန်လေးစားမှုလည်း ရှိကြသလို စကားလည်း မကြာခဏဆိုသလိုတော့ ပြောဖြစ်ကြတယ်။ သူလည်း မနက်ပိုင်း အပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်ရာက ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့ “လာဗျာ၊ ကြုံတုန်း စကားလေး ဘာလေးပြောရအောင်” ဆွဲခေါ်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖြစ်သွားရင်း နောက်ထပ်အသိမိတ်ဆွေတစ်ဦး နှစ်ဦးပါ ၀င်ပါလာတဲ့ စကားဝိုင်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်။
၂၀၁၅ နဲ့ သူ့အမြင်ကို ခေါက်ကြည့်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မရှိနိုင်တော့ဘူးလားလို့ ငါတော့ ထင်မိတယ်ကွ လို့ တစ်ခွန်းတည်း တိုတိုပြတ်ပြတ် ဖြေပါတယ်။ ဒါနဲ့ မြင်သမျှလေး ပြောပြပါဦး။ အန်ကယ့်အမြင်လေးသိပါရစေ၊ စကားထောက်မိတော့ ဒေါ်စုဟာ လွှတ်တော်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မယ်မယ်ရရမရှိဘဲ ထိုင်နေရတဲ့အတွက် လုပ်ချင်တာတွေ ရှိနေခဲ့ရင်တောင် ဘာမှ လုပ်မရတော့တာရယ်၊ သူသာ လွှတ်တော်မှာ ထိုင်မနေရင်လည်း ဒီထက် အခြေအနေဆိုးသွားနိုင်တယ်။ Democratic Reform လမ်းကြောင်းဟာ သူ လွှတ်တော်မှာ ထိုင်နေတဲ့အတွက် အသက်ဝင်နေသေးတာဖြစ်တယ် လို့ ထောက်ပြပါတယ်။
စကားပြင်ပြီး နောက်တစ်မျိုးပြောရရင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်း ဒေါ်စုလွှတ်တော်မှာ ထိုင်နေသေးတဲ့အတွက် ရှိကောင်း ရှိနိုင်မယ်။ ဒေါ်စုသာ လွှတ်တော်မှာ မရှိတော့ရင် ဒီလူတွေ ပြန်ပြီး ဘောင်းဘီကောက်ဝတ်လိုက်တာ ကြာလှပြီလို့ သူ့အမြင်ကို ထုတ်ပြောပါတယ်။
ကြားထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲပျက်အောင် မွှေနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်း တကယ်ရှိနေတယ်။ ဘာကိုမှ အလျှော့အတင်း မလုပ်ချင်တဲ့ အုပ်စု၊ သဘောထားတင်းမာတဲ့အုပ်စု၊ ဒီအုပ်စုက အဓိကပဲ။ ဒီအုပ်စုဟာ ဘယ်သူတွေလဲ၊ မသဲကွဲဘူးလို့ ပြောနေကြပေမယ့် မြင်တတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်လေ၊ တစ်ရက်က မန္တလေးအဓိကရုဏ်းအစီရင်ခံစာမှာပါသလို ၃ မျိုးရှိတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ပထမအုပ်စုက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို မလိုလားသူတွေက သမ္မတ ရာထူး နောက်ထပ် သက်တမ်း အတွက် ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်နဲ့ လုပ်ကြတာ၊ ဒုတိယ အချက်က NLD ကို ပစ်မှတ်ထားပြီးတော့ ဘာသာရေး အရ ခုတုံးယူ နိုင်ငံရေးအရ အသာစီး ရဖို့ လုပ်တာ၊ တတိယက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိသူတွေက တိုင်းပြည် မငြိမ်သက်အောင် လုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းအောင် လုပ်နေကြတာလို့ ပြောကြပြန်တယ်။ ၃ မျိုးရှိသလို ၃ မျိုးပေါင်း တစ်မျိုးတည်းလို့လည်း သတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေလည်း ရှိခဲ့ပြန်တယ်။ လုပ်သမျှ ပြသနာတွေဟာ ဒီအုပ်စု၊ ဒီလူတွေကြောင့်၊ တတိယအုပ်စုပေါ့ကွာ၊ ဒီလိုပဲ အကြမ်းမှတ်ထားပေါ့ကွာ။
ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်မနေလုပ်ရရင်လည်း ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ သေချာပေါက် ရှုံးလိမ့်မယ်။ အရင်က ဒီပဲယင်းကိစ္စ၊ လောလောလတ်လတ် လုပ်ထားတဲ့ လက်ပံတန်းကိစ္စ၊ ရှေ့က သန္တိသုခဘုန်းကြီးကျောင်းကိစ္စ၊ ကိုပါကြီးကိစ္စ၊ ဒေါ်ခင်ဝင်းကိစ္စ၊ ကချင်ဆရာမတွေ DNA စစ်တာတောင် အဖြေမထွက်သေးတဲ့ ကိစ္စတွေအပြင် ဒီရက်တွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်က မီးလောင်သံဃာတွေကို အမှုဖွင့်ခွင့်မပေးတာတွေဟာ ငါတို့ ရဲ လုပ်ထုံးမှာ မရှိဘူး။ အမှုလာဖွင့်ရင် လက်ခံကို ခံပေးရမှာက ရဲတာဝန်ပဲ။ အမှုဖွင့်သူ မရှိရင်တောင် ရဲက တရားလို လုပ်ပြီး အမှုဖွင့်ရမယ့်ဟာကို အမှုဖွင့်ခွင့် မရှိဘူး၊ စုံစမ်းခွင့်ပိတ်တယ်၊ နံပတ်တုတ်ကိုင်ပြီး ရိုက်နှက်တာတွေ၊ မန္တလေးမှာဆိုရင် ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကလူကို ရဲယူနီဖောင်းကြီးနဲ့ ဆွဲချလိုက်တာတွေဟာ ဥပဒေ ပ လုပ်ရပ် တွေချည်းပဲ။ အမိန့်ကို နာခံတာက တပိုင်းပေါ့ကွာ၊ ဥပဒေပြင်ပက မလုပ်ရဘူး၊ ဒီတော့ လူတွေ မကျေနပ်ထားတာ အများကြီးပဲ။ ဒီလူတွေကို ဒေါ်စုက ထိန်းထားတာ၊ ဒေါ်စု ရှိနေလို့ ဒီလူတွေရဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေဟာ ပေါက်ထွက်မသွားသေးတာလို့တော့ ငါမြင်မိတယ်။ ဖိထားလွန်းလို့ ခဏအောင့်နေတဲ့ ပေါက်ကွဲလုလုမီးတောင်ကြီးနဲ့ အတူတူပဲ။
ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးတာနဲ့ သူတို့ ရှုံးမယ်။ အခုဖွင့်မရတဲ့ အမှုတွေဟာ ကျေအေးသွားကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကို သူတို့ ကောင်းကောင်း သိတယ်။ ရခိုင်ကစ တစ်နိုင်ငံလုံး မီးတင်ရှို့ထားတာတွေ၊ လူသတ်ထားတာတွေ၊ လယ်သိမ်းထားတာတွေ၊ ပြည်သူပိုင်တွေကို ကိုယ်ကျိုးအတွက်သုံး ရောင်းစား လက်သိပ်ထိုးထားတာတွေဟာ တရားခံမရှိ၊ အမှုမပေါ်တာများကြတယ်။ သတ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့လူတွေဖက်က ပြန်တရားစွဲကြရင်၊ တရားလိုပေါ်လာရင် ဒါတွေဟာ အမှုမဖွင့်ပါနဲ့ လို့ ပြောလို့ မရမယ့်အချိန် ရောက်လာမှာကို သူတို့ ဘယ်လိုလားပါ့မလဲ။ သူတို့ ကိုယ့်လည်ပင်းကို ကိုယ် ကြိုးကွင်းစွပ်မယ့်လူတွေ မဟုတ်ကြဘူးလေ။
အဲဒီအခြေအနေကို မရောက်အောင် ရွေးကောက်ပွဲ မရှိမှာ ဖြစ်မှာ။ ဒီတော့ တတိယအုပ်စုသားတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုတ်သွားအောင်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မရှုံးအောင် သူတို့ ညစ်ပတ်ချင်ရင်၊ စကားခံထားတယ်နော်၊ (ညစ်ပတ်ချင်ရင်) ဖြစ်လာနိုင်တာ ၃ မျိုးလောက်ရှိနိုင်တယ်။ မိုးရာသီမတိုင်ခင် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့တော့ သူမြင်မိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နံပတ် (၁) က ထုံးစံအတိုင်း အဓိကရုဏ်းတွေဖက်ကို လှည့်နိုင်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါတော့ သိပ်မထင်မိတော့ဘူး။ တရုတ်ဖက်ကို မလှည့်ရဲဘူး။ ဒါက သေချာတယ်။ ကုလားဖက်ကိုလည်း လှည့်မရလောက်တော့ဘူး။ လူတော်တော်များများက သိနေကြပြီ။ မန္တလေးကိစ္စ မဖြစ်မြောက်ကတည်းက ၉၆၉ ဟာ အရှိန်သေသလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုတရဖြစ်နေတဲ့ ကုလားကို ဆက်ပြီးတော့ မုန်းနေဖို့ တရားပွဲတွေနဲ့ အဆက်ပြတ်မသွားအောင် သွေးမအေးသွားအောင် မီးထိုးပေးနေသေးတယ်။ အရင်က တစ်နှစ်တစ်ပွဲတောင် မရှိတဲ့ တရားပွဲတွေဟာ ခု တစ်ပတ် နှစ်ပွဲ သုံးပွဲ လုပ်ခွင့် ရနေသေးတယ်။ ဘယ်က ပိုက်ဆံတွေ ထွက်လာနေသလဲ။ ဘယ်သူတွေ ထောက်ပံ့နေကြသလဲ။ ဒီဘုန်းကြီးသွားလာဖို့ လုံခြုံရေးအားလုံးကို ဘယ်သူတွေ စီစဉ်ပေးနေသလဲ။ ဘုန်းကြီးအားလုံးက သူတို့ လူတွေလို့ ပြောနိုင်တဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးအားပေးတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေချည်းပဲ။ ဒါက တချက်။
ဒီတော့ ကုလားဖက်နဲ့လည်း တိုက်နေဦးမယ်။ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ တိုးတက်ဖို့ ကြံ့ခိုင်ရေးကို မဲပေးစို့လို့ အမည်တပ်နိုင်ဖို့ ကုလားကို လိုတဲ့အချိန် ထိုးကျွေးနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေဦးမှာပဲ။ ခုလည်း ၉၆၉ ကို မဘသ လို့ ပြောင်းထားပေမယ့် လိုရင် ထပ်ပြောင်းလိမ့်ဦးမယ်လို့ ထင်မိတယ်။ အဓိကရုဏ်းတော့ မဖြစ်လောက်တော့ဘူး၊ ငါ ဒီလိုပဲ ထင်မိထားသေးတယ်။
(၂) အချက် အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ပျက်သွားနိုင်တာက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ အရှိန်မြှင့်တိုက်ပွဲတွေ ဖန်တီးဖို့ပဲ။ တိုက်ပွဲတွေ အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အေးချမ်းတည်ငြိမ်မရှိလို့ ရွေးကောက်ပွဲ ပျောက်ရပါတယ်ပေါ့။ ခုလည်း ကရင် DKBA ၊ ကချင် KIA ၊ TNLA ၊ ကိုးကန့်၊ ၀၊ ရခိုင် အကုန်လုံးနဲ့ ချနေတာပဲလေ။ ဖြစ်နေတဲ့ အရှိန်လေးကို ထပ်တင်လိုက်ဖို့ပဲ လိုတယ်။ နောက်တစ်ခါ နေရာအနှံ့ ဗုံးခွဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ တစ်နှစ်ကလို သာကေတဖက်က အမှိုက်ပုံတွေမှာ ဗုံးခွဲ၊ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်တက် ဗုံးထောင်၊ စောနေတိုးဆိုပြီး အမည်တစ်ခုကို ရွတ်ပြ၊ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွေ အကြီးအကျယ်လုပ်၊ ဒလံဂျာနယ်တွေကတဆင့် ကြော်ငြာ၊ ဟိုလူ လက်ညှိုးထိုး၊ ဒီလူ လက်ညှိုးထိုး၊ အားလုံးက ကြောက်လန့် စိုးရွံ့နေရအောင် လုပ်ထား။ ပင်မပစ်မှတ်က ရွေးကောက်ပွဲ ပျက်သွားဖို့ပဲ။ နောက်ဆုတ်သွားစေဖို့၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြန်ဝင်လာဖို့ပဲ။
ငါနောက်တစ်ခု အကြီးအကျယ် စိုးရိမ်မိတာ ဒီသင်္ကြန်တွင်းပဲ။ အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူလို့ အမည်တပ်ပြီး ဂျာနယ်တွေမှာ ခုတလော ပါလာနေတယ်။ စစ်ကိုင်းလိုလို၊ ရှမ်းတောင်လိုလို၊ ကြိုလွှင့်ထားပြီးသား။ ဒီကြားထဲမှာ IS အမည်တပ်ပြီး သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်အကြီးကြီးတစ်ခုမှာ ဗုံးခွဲချလိုက်လို့ လူ ၅၀ – ၁၀၀ လောက် သေပြီဆိုရင် ပြီးသွားပြီ။ လူ ၁၀၀ လောက်ပဲ ရင်းရမယ်။ မရင်းရဲစရာ မရှိဘူး။ ဒီလူတွေမှာ ပြည်သူ ပြည်သား အသက်သေကြေမှာကို စာနာစိတ်က တစက်မှ မရှိဘူး။ ဒါက အားလုံး အသိပဲလေ။ မှတ်မိဦးမယ်၊ X2O မဏ္ဍပ်ဗုံးခွဲတရားခံဆိုပြီး မွတ်ဆလင်ကို လူမှားဖမ်းတဲ့ထဲမှာ အခု လ၀က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီတောင် ဦးစီးပြီး သတင်းစာတွေ ဘာတွေ ရှင်းလိုက်သေးတယ်ကွာ၊ မင်းတို့ သိကြဦးမယ်။ တရားခံအစစ် ပျောက်သွားတယ်။ ကြားထဲက မဆိုင်သူတွေ ဘ၀ပျက်ရတယ်။ ထိုးကျွေးကြတာကို ပြောတာပါကွာ။ ဒီလူတွေ ဒီလို လုပ်ဖူးတယ်။ ဒီလို လုပ်တတ်တယ်။ လုပ်ရဲတယ်။
ခုလည်း ၂၀၁၅ မှာ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ဗုံးကွဲပြီး လူ ၁၀၀ လောက် အသေပြ၊ အဲဒီထဲမှာ အနုပညာရှင် နည်းနည်းပါးပါး ဒူးပြတ် ပေါင်ပြတ် အသေပြ၊ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး နှစ်ပါးလောက် သွေးရွှဲရွှဲနဲ့ အသေပြလိုက်ရင် ရပြီ။ IS အဖွဲ့က မြန်မာပြည်ကို ဂျီဟတ်လုပ်နေပါပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဂျီဟတ်လုပ်ပါတယ်လို့ အစိုးရ သတင်းစာတွေ ကိုယ်တိုင်က ရေး၊ ကုလားရုပ်တွေနဲ့ ချိတ်ပြလိုက်ရင် မင်းတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။ တစ်နိုင်လုံးမှာ အဓိကရုဏ်း အကြီးအကျယ်ထပ်ဖြစ်၊ သွေးချောင်းစီးကုန်ကြလိမ့်မယ်။ အကွက်က ရိုးရိုးလေးပဲ၊ အဖြေ ဆန်းဆန်းလေး ထွက်သွားမယ်။ ဘယ်အဖွဲ့မှ တားမရတော့ဘူး။ မြို့တိုင်းမှာ သူတို့လူတွေချည်းပဲ။ ချထားပြီးသား။ စလုပ်မယ့် အကြောင်းတရား ဖန်တီးပေးလိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်။ ပွဲစတာနဲ့ အချိန်ကိုက် အခါကိုက် ဖျက်ဆီးသတ်ဖြတ်မှုတွေ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။
၁၉၉၄ ဧပြီ တုန်းက ရ၀မ်ဒါမှာ ဟူတူ နဲ့ တွတ်ဆီတွေ အပြန်အလှန်ဆော်ကြတာကို သိတယ်မလား။ ရက် ၁၀၀ အတွင်း လူ ရှစ်သိန်းကျော် အသတ်ခံကြရတယ်။ ကုလသမဂ္ဂမပြောနဲ့၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှ တားဖို့ အချိန်မရလိုက်ဘူး။ ကလေး၊ မိန်းမ၊ အရပ်သား၊ လူတွေ ကုန်သွားပြီ။ ဒါမျိုး ဒီမှာ မလုပ်ဘူး၊ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်သလဲ။ မိတ္ထိလာမှာလည်း ဘယ်သူမှ မတားနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကလေးတွေကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြခဲ့တာ။ ရဲတွေ တားနိုင်ပေမယ့်၊ လက်ပတန်းမှာ ကျောင်းသားလေးတွေကို နံပတ်တုတ်နဲ့ရိုက်ပြီး တားသလို တားလို့ရလျှက်နဲ့ အထက်အမိန့်မရလို့ မတ်တပ်ရပ်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။
လက်ပတန်းမှာ ကျောင်းသားတွေကို ရိုက်မိန့်လာတယ်။ လက်ပံတောင်းမှာ မီးဆွမ်းကပ်မိန့်လာတယ်။ မိတ္ထိလာမှာ မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းထားတယ်။ ဒီလူသတ်သမားတွေ၊ ကြိုးကိုင်သူတွေဟာ ခုချိန်ထိ လက်မည်းကြီး အမည်ခံပြီး အရှင်လတ်လတ်ကြီး ငုတ်တုတ်ကြီးရှိနေသေးတယ်။ လူ လေး ငါးဆယ်လောက် သတ်ဖူးသူတွေဟာ ပိုသတ်ဖို့လည်း ၀န်မလေးနိုင်ဘူး။ အကြီးကြီးကို လုပ်ပြမှ အပြောင်းအလဲ အကြီးကြီး ဖြစ်သွားမှာ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် အကွက်ကောင်းကောင်း စောင့်နေတာပဲ ရှိတယ်။ ဒီသင်္ကြန်မှာ ဒီတစ်ချက်ကို ငါ အစိုးရိမ်ဆုံးပဲကွာ လို့ သူက ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူပြောပြတဲ့ ဒီအတွေးအမြင်က ကျွန်တော့်ကို တကယ်ကျောချမ်းစေပါတယ်။ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးရင် ဖြစ်သွားနိုင်တာပါပဲ။
နံပတ် (၃) က ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ဒေါ်စု လုပ်ကြံခံရနိုင်တယ်။
ဒီအချက်ကို အရင်ကတွေးဖူးပေမယ့် ဖယ်ထားတာ ကြာနေပါပြီ။ တလောက မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ လက်ပတ်နီစွမ်းအားရှင်တွေကို ထုတ်သုံးနေသေးတာကို မြင်ကတည်းက အားလုံးဟာ အရင်အတိုင်းပဲ။ ပြောင်းလဲမှု ဘာမှမရှိသေးဆိုတာကို မြင်ကြမယ်။ ပြောင်းလဲမှုအားလုံးရဲ့ အရင်းအမြစ်ဟာ အသက်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲ။ ဒေါ်စုသာ တ်ိမ်းပါးသွားရင် အဖြေဟာ ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ ဒီမှာလည်း ကုလားကို ထိုးကျွေးလို့ ရနိုင်သေးတယ်။ ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက်နှစ်ကောင်၊ ဒေါ်စုကို သတ်တာ ကုလားပါခင်ဗျာ။ ကုလားရုပ်ခံလေးနဲ့ ပြီးသွားပြန်ပြီ။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်လောက်သလို မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ငါ ဆုအတောင်းဆုံးပဲ။ နိုင်ငံတကာက မျက်လုံးဒေါက်ထောက် ကြည့်နေတဲ့ကြားက အလုပ်ခံရရင် ဘယ်သူတွေ အမြတ်ထွက်မလဲ။ ရွေးကောက်ပွဲ ချိန်ခွင် အနည်းနဲ့ အများအပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ချက်ကို ငါ ခဏခဏ ပြန်ပြီး စဉ်းစားမိတယ်လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။
အားလုံး ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင် ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာမှာ လုပ်ရင် ရှုံးမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း ကျင်းပကို ကျင်းပပေးရတော့မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ရက်ထွက်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် ရှုံးလို့ကို မရဘူး။ ရှုံးရင် အာဏာ လွှဲပေးလို့ မရဘူး။ ဒါကသေချာတယ်။ ရှုံးတာနဲ့ သူတို့ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေဟာ အကုန်ပေါ်လာမှာ။ မျိုထားသမျှ ပြန်လျော်ရမှာ။ ဒါလည်းသေချာနေပြန်တယ်။ ဒါတွေက ထွက်လာနိုင်ဖို့ ထွက်ပေါက်လိုတယ်။ သရေလောက်ဆို မဆိုးဘူး။ သူတို့ ခု လုပ်နေသမျှဟာ သရေလောက်ရဖို့၊ ၅၀-၅၀ လောက် ရဖို့ မှန်းပြီး လုပ်နေကြတဲ့ အကွက်တွေချည်းပဲ။ စစ်တပ်က တမတ်နဲ့ပေါင်းပြီး ၅၀-၆၀ ကျော်နိုင်ရင် သူတို့အသက်ရှိဦးမယ်။
NLD က ကျေအေးပါတယ်၊ အာဃာတ မထားဘူးလို့ အလကားအော်နေခဲ့တာမှ မဟုတ်ဘဲ။ သူတို့ ဘာကို စိုးရိမ်နေသလဲဆိုတာတွေကို NLD က သေသေချာချာကြီးကို သိထားတယ်။ ဒါကြောင့် NLD နိုင်ရင် သူတို့ကို ဘာမှ ပြန်မလုပ်ပါဘူးလို့ ဖွင့်ဟထားသလို သူတို့ဖက်ကလည်း နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူလို့ မရအောင် ဥပဒေကို အဆင့်ဆင့် ချုပ်ထားတယ်။ စစ်တပ်က တမတ်ဖိုးပါနေသေးတာ ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ။ မျိုထားသမျှ ပြန်မအန်ရအောင် လုပ်ထားတာတွေချည်းပဲကွာ။ ဒါပါပဲ။ နိုင်ငံရေး အစစ်အမှန်တွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။
မင်းကို ပြောပြတဲ့ ငါ့အမြင်တွေကလည်း ‪#‎မှန်းဆချက်တွေပါပဲ‬။ မှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ လွဲသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်မယ်။ ကောင်းတဲ့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းရတာလည်း အမောပါပဲကွာ။ ကောင်းတဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပဲ မြင်ချင်ပါတယ်။ ငါလည်း မင်းတို့တွေကို ဒီမက ပြောချင်တာတွေ ရှိနေသေးတယ်။ ခုတော့ ငါလည်း ပြန်ရဦးမယ်ကွ။
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ နောက်တွေ့ချင်ပါသေးတယ်။ စကားပြောရတာ အင်မတန်ဗဟုသုတရစေပါတယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ။
စကားဝိုင်းအမည်ခံပေမယ့်လည်း နားထောင်သက်သက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ စကားဝိုင်းလေး အပြီးမှာ ကျန်ခဲ့သူတွေဟာ စကားဆက်ပြောစရာ မကျန်တော့သလိုပါပဲ။ အဲဒီ ရဲမှူးကြီးနဲ့ ပြောခဲ့သမျှကို အတွေးထဲမှာပဲထားဖို့၊ မရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် မနေ့ မနက်ပိုင်းက ရခိုင်သူပုန်နဲ့ စစ်တပ်ချကြတဲ့သတင်းကိုလည်း ကြားရော၊ ငါတို့အန်ကယ်ကြီးပြောတာ တစ်ချက်တော့ ပက်ပင်းလက်ငင်း ထိပဟလို့ တွေးမိရင်း သူ့အမြင်အချို့လို့ပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မှတ်ပေးကြဖို့ ပြောပြခဲ့သမျှ ရေးချလိုက်ရပါတယ်။
၃၀ မတ်လ ၂၀၁၅
This entry was posted on April 1, 2015 at 6:36 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.